बिहान बिहानै देखिएको यस्तो सपनाले बनाउँछ करोडपति ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/बिहान बिहानै देखिएको यस्तो सपनाले बनाउँछ करोडपति !
काठमाडौँ । सपना सबैले देख्ने गर्छन्। अवचेतन मनमा भएका कुरालाई हाम्रो अगाडी ल्याएर देखाउने माध्यमलाई सपना भनिन्छ।यस्तै हरेक समयमा देखिएको सपनाको आ आफ्नै महत्व हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रले बिहान देखिएको सपना सत्य साबित हुने गरेको बताएका छन्। यदि तपाईले बिहानको समयमा यस्ता सपनाहरु देख्नु भएको छ भने त्यो सपना तपाईको लागि निकै शुभ हुनेछ।
१) यदि सपनामा कमिला यता उता गरिरहेको देखिएको छ भने त्यस्तो सपनाले धन प्राप्त हुन्छ।२) यदि सपनामा कुनै मन्दिरको दर्शन गरेको छ भने त्यस्तो सपना शुभ हुन्छ। त्यस्तै मन्दिरको कलश पनि देखिएको छभने माता लक्ष्मीले घरमा बास गर्नेछिन्।
३) यदि सपनामा नरिवल खाएको देखिएको छ भने तपाईको तेजोरी पैसाले भरिनेछ।४) सपनामा सानो बच्चा चल्दै गरेको देखिएको छ भने धन लाभ हुन्छ।५) सपनामा गाईको बाच्छाले दुध खाइरहेको छ भने पैसाको अभाव हुने दिन सकिनेछ। यस्तो सपनाले करोडपति बनाउँछ। ६।सपनामा कुकुरले टोकेको छ भने यो छिट्टै धनी बन्ने योग हो।